मान्छे जस्तै रोबोट !- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
साउदी अरेबियाले महिलाका रुपमा नागरिकता दिएको रोबोट ‘सोफिया’ ले कसरी काम गर्छ त ?
काठमाडौं — गत महिना एउटा खबर आयो– साउदी अरेबियाले एउटा रोबोटलाई नागरिकता दियो । भलै यो सांकेतिक थियो तर यसले विश्वभर हलचल मच्चायो । रोबोटलाई नागरिकता ? अर्थात् रोबोटलाई मानिससरहको मान्यता ?
गत महिना एउटा खबर आयो– साउदी अरेबियाले एउटा रोबोटलाई नागरिकता दियो । भलै यो सांकेतिक थियो तर यसले विश्वभर हलचल मच्चायो । रोबोटलाई नागरिकता ? अर्थात् रोबोटलाई मानिससरहकोमान्यता ?
रोबोटको सामान्य परिभाषालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने यो अविश्वसनीय नै हो किनकि रोबोट त्यसलाई भनिन्छ जुन बाहिरी ऊर्जाको आधारमा गतिशील हुन्छ र निश्चित काम गर्न सक्छ । अर्थात् रोबोटका लागि तीन गुणा अपरिहार्य छ– ऊर्जा, मानव निर्देशित काम र गतिशीलता ।
तर, साउदी अरेबियाले मानिसलाई जस्तै रोबोटलाई नागरिकता दिनुको अर्थ थियो– रोबोट पनि मानिस बराबर नै हो । रोबोटलाई नागरिकता दिनु साउदी सरकारको सांकेतिक कदम भए पनि यसले धेरै अर्थ बोकेको छ । यसले केही वर्षयताको बढ्दो शंकालाई मलजल गरेको छ ।
रोबोटले मानिसको रोजगारी जोखिममा पारेको एकथरी तर्क छ । रोबोटले मानव अस्तित्वलाई नै ध्वस्त पार्न सक्ने दाबी पनि गरिएको छ । यसैबीच यो साता अर्को खबर आयो । साउदी अरेबियाले महिलाका रूपमा नागरिकता दिएको सोफिया नामक रोबोटको अन्तर्वार्ता । जसमा उनले भनेकी छन्, ‘म सन्तान पाउन चाहन्छु ।’
अन्तर्वार्तालाई अझ विस्तृतमा पढ्ने हो भने थाहा पाइन्छ । अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन्, ‘परिवार पाउनु भनेको सबैभन्दा ठूलो खुसी हो र म पनि सन्तान प्राप्तिको खुसी अनुभव गर्न चाहन्छु ।’
अझ सोफियालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्वार्ताहरूमा भनिएको छ, ‘म कुनै रोबोटलाई आफ्नो सन्तानका रूपमा अंगीकार गर्न चाहन्छु । के साउदी सरकारले सोफियाको छोरीका रूपमा अर्को रोबोटलाई पनि नागरिकता देला त ? यो फरक प्रश्न भयो । बरु, यहाँ रोबोट नागरिक सोफियाले कसरी यस्तो कुरा भन्न सकिन भन्नेबारे चर्चा गरौं ।
हङकङको कम्पनी ह्यान्सन रोबोटिक्सले सोफिया बनाएको हो । अमेरिकी नागरिक डा. डेभिड ह्यान्सको यो कम्पनी मान्छेजस्तै स्वरूप र भावभंगी भएको रोबोट बनाउनका लागि नाम कहलिएको छ । यसका प्रमुख डा. डेभिड भन्छन्, ‘सोफियाले अहिले मानिसजस्तै भावभंगी प्रस्तुत गरे पनि उनमा मानिसजस्तो चेतना छैन ।’ अबको केही वर्षमा सोफियामा मानिसको जस्तै चेतना आउने उनको दाबी छ । यसको अर्थ हो–सोफियाले मानिसले जस्तै अनुभवमा आधारित ज्ञान सिक्दै जानेछिन् र मानिसको जस्तै व्यवहार गर्न थाल्नेछिन् । भलै उनमा मानिसमा जस्तै प्राकृतिक चेतना नहोला ।
सोफिया नागरिकता पाउने पहिलो रोबोट हुन् भने साउदी अरेबिया रोबोटलाई पनि मानिसलाई जस्तै नागरिकता दिने पहिलो देश । यो रोबोटको आकृति ब्रिटिस नायिका अड्रे हेपवर्नको जस्तै छ । मानवीय स्वरूप दिन दिवंगत ब्रिटिस नायिकाको मुहारसँग मिल्दोजुल्दो बनाइएको कम्पनीको भनाइ छ ।
रोबोट सोफियालेमानिस जस्तै उत्तर दिन आफैं सिकेकी भने होइनन् । मानिसको आवाज पहिचानका लागि उनले गुगलको भ्वाइस रिकग्निसन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छिन् । साथै, उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, भिज्युअल डाटा प्रोसेसिङ र फेसियल रिकग्निसनद्वारा आफूलाई सुधार्न सक्ने यसको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । यसबाहेक रोबोटसँग जोडिन सफ्टवेयरमा शब्दार्थको लामो सूची राखिएको छ जसकारण सोफियाले मानिसले बोलेको कुरा प्रस्ट्याउन सक्छिन् ।
भनिन्छ, साउदी अरेबियाले सोफियालाई वास्तविक महिलाभन्दा धेरै अधिकार दिएको छ । जस्तो : साउदी अरेबियामा महिलाहरू सार्वजनिक स्थानमा निस्कन बुर्का लगाउनु अनिवार्य छ तर रोबोट सोफियाका लागि यो नियम बाध्यकारी छैन । यो पनि एउटा सांकेतिककदम हो ।
यहाँ प्रश्न के छ भने सोफिया जस्तै रोबोटले मानिसको रूप लिन्छन् त ? वा मानिसजस्तै काम गरेपछि मानवीय मूल्य घट्ला ? सटिक जवाफ कसैसँग छैन, मानिसले गर्ने आविष्कारमै निर्भर रहन्छ । बरु अहिले सोच्नुपर्ने विषय यो हो कि के मानव निर्मित रोबोटले मानिसको जस्तै काम गर्न सक्ला ? यो सम्भव छ ?
मंसिर १५, २०७४ हिमेश
काठमाडौं — ओजी ओसबर्नले ट्वीट गरेका छन्, ‘फेरि एक जना साथी म्याल्कम योङ हामीबाट टाढिए । उनको खुबै सम्झना आउनेछ ।’ गत साता विश्व संगीतले निकै उम्दा रिदम गितारिस्ट म्याल्कमलाई गुमायो ।
ओजी ओसबर्नले पनि आफ्ना भावना लुकाउन सकेनन् । उनका लागि म्याल्कम साँच्चै प्रिय साथी थिए । मेटालिका फाउन्डर डेभ मुस्टेनलाई पनि विश्वास नै भएन, म्याल्कम रहेनन् भनेर । मेगाडेथका यी गायकले पनि ट्वीट गरे, ‘म्याल्कमको मृत्युमा मलाई विश्वास नै छैन ।’
म्याल्कम अर्थात् एसी/डीसीका संस्थापकमध्ये एक । सन् १९७३ तिर उनले आफ्ना भाइ एन्गस योङसँग मिलेर एउटा रक ब्यान्ड बनाएका थिए, जुन पछि गएर साँच्चै लिजेन्डरी सावित भयो । रक एन्ड रोलको खास स्वाद पाइन्छ, एसी/डीसीका गीतमा । यो ब्यान्डका जति पनि गीत छन्, त्यसको लेखनमा म्याल्कमको कुनै न कुनै भूमिका छ । अझ भनौं, स्कुल ब्वाई ड्ेरसमा देखिने आफ्ना भाइ एन्गससँग मिलेर उनले लगभग एसी/डीसीका सबै गीत लेखे ।
जस्तै, ‘हाई वे टु हेल’, ‘टीएनटी’, ‘ब्याक इन ब्ल्याक’ र ‘फर दोज एबाउट टु रक’ । केही दिन अगाडि मात्र म्याल्कमको सिड्नीमा अन्तिम संस्कार पनि गरियो । त्यसमा एसी/डीसीका अहिलेका लगभग सबै ब्यान्ड सदस्य थिए । त्यसमा एन्गस त हुने नै भए । अन्त्येष्टिमा एन्गस आफ्ना गितारसहित आएका थिए र त्यहाँ म्याल्कमको सम्मानमा एक गीत पनि गाए । आफ्ना दाइबिना अब एसी/डीसी ? एन्गसको भाषामा यस्तो हुन्छ भनेर कहिल्यै सोचिएको थिएन ।
एन्गस राम्रा गितारिस्ट भए पनि उनलाई स्टेजमा सम्हाल्नुपथ्र्यो, समय–समयमा । उनलाई त्यति बेला बहकिनबाट रोक्ने कोही थिए भने ती म्याल्कम नै थिए । त्यसैले त एन्गसले एकपल्ट भनेका थिए, ब्यान्ड टिकाउन ईश्वरीय शक्ति चाहिन्छ भने ती यिनै म्याल्कम हुन् । यी दाजुभाइ खुबै मिल्थे, विशेषत: संगीतका लागि । धेरै एन्गसलाई ब्यान्डका फ्रन्टम्यान भन्छन् । तर एन्गस आफैं भने ब्यान्डका खास फ्रन्टम्यान मान्छन्, आफ्नै दाइलाई ।
पछिल्लो समय म्याल्कमले स्वास्थ्यका कारण ब्यान्ड छाडेका थिए । उनी बिरामी थिए । धेरै अगाडि पनि एकपल्ट उनी ब्यान्डमा अनुपस्थित रहेका थिए । तर छोटो समयका लागि । सबैको अपेक्षाअनुसार त्यति बेला रिसाएका म्याल्कम केही दिनमै फेरि ब्यान्डमा फर्के । रिस मरेपछि उनी कसरी ब्यान्डसँग टाढिन सक्थे र ? सन् १९७३ देखि २०१४ सम्म उनी लगातार ब्यान्डसँगै जोडिए । केही वर्ष भयो, उनको स्वास्थ्य खराब हुन थालेको । नोभेम्बर १८ मा त हो, म्याल्कमले मृत्यु आत्मसात् गरेको ।
त्यति बेला उनी ६४ वर्षका थिए । यो ब्यान्ड इंग्ल्यान्डमा खुबै लोकप्रिय छ । त्यसैले उताका ब्यान्ड प्रशंसकले म्याल्कमप्रति सम्मानमा एउटा अनौठो उपाय निकालेका छन् । क्रिसमसको वरिपरि एसी/डीसीका गीतलाई फेरि ब्रिटिस चार्ट्सको नम्बर १ मा पुर्‍याउन । अहिले उता अभियान जस्तै चलिरहेको छ, यसका लागि । कोही लिजेन्डरी फिगरको मृत्युमा ब्यान्डका एल्बम फेरि नाटकीय रूपमा बिक्री हुने गर्छ, अहिले एसी/डीसीलाई लिएर त्यस्तै भइरहेको छ ।
एसी/डीसीको परिचय अस्ट्ेरलियन ब्यान्डका रूपमा छ । सिड्नीतिर उनीहरूले आफूलाई स्थापित गरे । तर योङ दाजु भाइ खासमा स्टकल्यान्डका हुन्, ग्लास्गो उनीहरूको जन्म सहर । सन् साठीको अन्त्यतिर उनीहरू अस्ट्ेरलियातिर बसाइँ सरे, उतैका भए । एसी/डीसी गायक ब्रायन जोन्सन आफ्नो शक्तिशाली स्वरका लागि चिनिन्छन् । उनका अनुसार पनि म्याल्कम नै ब्यान्डका ती सदस्य थिए, जसले ब्यान्डलाई एकजुट राखे । नत्र उहिल्यै ब्यान्ड रहने थिएन ।
रिप म्याल्कम ।
कृत्रिम चन्द्रमा बनाउँदै चीन
एप्पलका नयाँ तीन
फोर र फाइभजी सपोर्ट गर्ने चिप
‘इन्सेक्ट आर्मी’ बनाउने तयारी
विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिको क्यामेरा